01/07/2020 – Asian Harm Reduction Network (AHRN)
Today, 21st July is the International Remembrance Day,…….
01/07/2020 by albert wilson Posted in Activities, Home-Slider
ယနေ့၊ ဇူလိုင် ၂၁ ရက် သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ ရသောသူများအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမှတ်တရနေ့ဖြစ်သည်။ UNODC ၏ ၂၀၂၀ ကမ္ဘာ့မူးယစ်ဆေးဝါးအစီရင်ခံစာအရ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရာနှုန်းပြည့်ကာကွယ်နိုင်သော မူးယစ် ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သော သေဆုံးမှုကြောင့်လူပေါင်း ၅၈၅,၀၀၀ ခန့်အသက်ဆုံးရှုံးနေကြသည် ဟုဆိုပါသည်။ ၅၄ စက္ကန့်တိုင်းတွင် အဖိုးထိုက်သော ဘဝတစ်ခုဆုံးရှုံးနေခြင်းဖြစ်သည်။
ဘေးဖယ်ပစ်ပယ်ထားခြင်းသည် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများကို လူနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်အကြီးအကျယ်ကျရောက်စေသည်။
ညနေ ၃ နာရီတိတိတွင် တမိနစ်ခန့် တိတ်ဆိတ်စွာနေရန် ကျွန်ုပ်တို့ နှင့်အတူပါဝင်ဖို့ သင့်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူများအတွက် သင်၏အတွေးအမြင်များသည် အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုထိခိုက်နစ်နာခဲ့သော လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စည်းလုံး ညီညွတ်စွာ ရပ်တည်ကြမှာဖြစ်ပါသည်။
ငါတို့သည် ဆုံးရှုံးသွားကြသူများအတွက် ပူဆွေးကြ၏….သတိရကြ၏….
Today, 21st July is the International Remembrance Day for people who’ve lost their lives asaresult of drug use.
The UNODC’s 2020 World Drug Report suggests around 585,000 people lose their lives to wholly-preventable drug-related deaths every year. That is one precious life every 54 seconds.
Intense markers of marginalization disproportionately affect people who use drugs, with devastating human and societal costs.
We invite you to join us inaminute of silence at 15:00.
Your thoughts for those who’ve lost their lives are important, we stand in solidarity with affected communities.
We mourn you. We remember you.
AHRN Kachin Project Sites staff take part in Support Don’t Punish Campaign
AHRN- ကချင်ပြည်နယ်ရုံးခွဲများမှ ဝန်ထမ်းများမှ ကူညီပါ-အပြစ်မပေးပါနဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်
ဇွန်လ ၂၆ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သော ကူညီပါ-အပြစ်မပေးပါနဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုကို ကမ္ဘာနှင့် အဝှမ်း ကျင်းပလျက်ရှိရာ AHRN ကချင်ပြည်နယ်ရုံးခွဲများမှ ဝန်ထမ်းများမှလည်း ပါဝင်ခဲ့ ပါသည်။ ကူညီပါ-အပြစ်မပေးပါနဲ့ Logo ပါဝင်သော လက်ချုပ် နှာခေါင်းစည်းများကို ရုံး၊ ဆေးခန်းများ၊ အစည်းအဝေးများ၊ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးပွဲများတွင် တပ်ဆင်၍ သဘော ထားဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီး logo ပါ လက်ချုပ်နှာခေါင်းစည်း အခု ၂၅ဝခန့်ကိုလည်း အထက်ပါ နေရာများသို့ တက်ရောက်ကြသူများနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူ လူနာများသို့ ဝေမျှပေးခဲ့ပါ သည်။
In June 26th, The World celebrates Support Don’t Punish Campaign and AHRN-Kachin Projects Office staff also contributed to the campaign. AHRN staff wore Hand-made face masks with the support don’t punish logo and showed their commitment in their daily activities at office, clinics, meetings, health education session. They also shared SDP logo printed face masks to communities who came to office, meetings, HE sessions and drug user clients who came to AHRN clinics.